Akụkọ - Kedu ihe mere eji egwu egwu na ịnagide abụghị otu
Kedu ihe mere radial play na ndidi abụghị otu na otu
E nwere ụfọdụ ihe mgbagwoju anya na gburugburu mmekọrịta dị n'etiti nkenke nke a na-amị, nnabata ihe nrụpụta ya na ogo nke mwepụ nke ime ma ọ bụ 'egwuregwu' n'etiti agbụrụ na bọọlụ. N'ebe a, Wu Shizheng, onye isi njikwa nke JITO Bearings ọkachamara nke obere na nke pere mpe, na-eme ka anyị mata ihe kpatara akụkọ a ji dịgide na ihe ndị injinia kwesịrị ịchọ.
N'oge Agha Worldwa nke Abụọ, na ụlọ ọrụ mgbochi na Scotland, otu nwoke a ma ama aha ya bụ Stanley Parker mepụtara echiche nke ezi ọnọdụ, ma ọ bụ ihe anyị maara taa dịka Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T). Parker chọpụtara na agbanyeghị na ụfọdụ akụkụ arụ ọrụ a rụpụtara maka torpedo na-ajụ mgbe ha nyochachara, a ka na-eziga ha na mmepụta.
Mgbe o lebakwuuru ya anya, ọ chọpụtara na ọ bụ ihe kacha dịrị mmadụ mma. Omenala XY na-ahazi nnwere onwe mepụtara mpaghara nnagide, nke wepụrụ akụkụ ahụ n'agbanyeghị na ọ nwere isi ihe dị n'akụkụ oghere gburugburu akụkụ akụkụ anọ. Ọ gara n'ihu na-ebipụta nchoputa ya banyere otu esi achọpụta ezi ọnọdụ na akwụkwọ akpọrọ Drawings and Dimensions.
* Ime ụlọ
Taa, nghọta a na-enyere anyị aka ịzụlite njigide nke gosipụtara ụfọdụ egwuregwu ma ọ bụ ịtọpụ, nke a na-akpọghị nhichapụ nke ime ma ọ bụ, karịa nke ọma, radial na egwuregwu axial. Egwuru egwu Radial bụ nkwụsị nke a tụrụ anya n'akụkụ akụkụ nke amị axis na axial play bụ nkwụsị nke atụle ya.
Emere egwu a n'ime ntaneti site na mbido iji kwe ka ibugharị na-akwado ibu na ọnọdụ dịgasị iche iche, na-eburu n'uche ihe ndị dị ka mmụba nke okpomọkụ yana etu ntinye n'etiti mgbanaka dị n'ime na nke mpụga ga-emetụta ibi ndụ.
Kpọmkwem, nwechapụ nwere ike imetụta mkpọtụ, ịma jijiji, nrụgide nke okpomọkụ, ịgbagha, nkesa ibu na ndụ ike ọgwụgwụ. Egwuregwu radial dị elu na-achọsi ike na ọnọdụ ebe a na-atụ anya ka mgbanaka dị n'ime ma ọ bụ osisi na-adịwanye ọkụ ma gbasaa n'oge eji ya tụnyere mgbanaka mpụga ma ọ bụ ụlọ. N'okwu a, egwuregwu na-agba ga-ebelata. N'aka nke ọzọ, egwu ga-abawanye ma ọ bụrụ na mgbanaka mpụta gbasaa karịa mgbanaka dị n'ime.
Egwuregwu axial dị elu bụ ihe na-achọsi ike na sistemụ ebe enwere nkwekọrịta n'etiti ogwe na ụlọ dị ka nhazi nwere ike ime ka nnabata ya na obere nkwụsị dị n'ime ọ ga-ada ngwa ngwa. Nnukwu nnweta nwekwara ike ikwe ka njigide ahụ ịnagide ibu nrụgide dị elu karịa ka ọ na-ewebata akụkụ kọntaktị dị elu.
Ọ dị mkpa na ndị injinia na-akụzi nguzozi ziri ezi nke nkwụsị dị n'ime ya. Bearingrụsi ọrụ ike gabiga oke na erughị eru na-egwu egwu ga-ewepụta oke okpomọkụ na esemokwu, nke ga-eme ka bọọlụ ahụ gbafuo n'okporo ụzọ ahụ ma meekwa ngwa ngwa. N'otu aka ahụ, oke nhichapụ ga-abawanye mkpọtụ na ịma jijiji ma belata ngbanwe ntụgharị.
Enwere ike ịchịkwa mkpochapụ site na iji ihe dị iche iche. Injinia dị mma na-ezo aka na nnabata n'etiti akụkụ abụọ. A na-akọwakarị nke a dị ka osisi n'ime oghere ma na-anọchi anya ogo nke nkwụsi ike ma ọ bụ ịtọghe n'etiti osisi na mgbanaka dị n'ime na n'etiti mgbanaka mpụga na ụlọ. Ọ na-egosipụtakarị na rụrụ arụ, nwepu ụzọ ma ọ bụ nke siri ike, nnyonye anya dabara.
Ngwunye dị n'etiti mgbanaka dị n'ime na aro dị mkpa iji debe ya ma gbochie creepage na-achọghị ma ọ bụ ịmịchapu, nke nwere ike iwepụta okpomọkụ na ịma jijiji ma bute mmebi.
Agbanyeghị, ndabichi nnyonye anya ga-ebelata nwechapụ na ịgba bọọlụ ka ọ na-agbasa mgbaaka dị n'ime. A yiri nke ahụ siri ike dị n'etiti ụlọ na mgbanaka nke dị n'èzí na-agba ọsọ na-egwu obere radial ga-abịanye mgbanaka dị n'èzí ma belata nwechapụ ọbụna n'ihu. Nke a ga - ebute nhichapụ dị n'ime - na - eme ka ntụgharị ahụ dị ukwuu karịa oghere - ma duga oke esemokwu na mbido mbido.
Ebumnuche bụ ịnweta egwuregwu arụ ọrụ efu mgbe amị na-agba n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Agbanyeghị, egwuregwu radial mbụ achọrọ iji mezuo nke a nwere ike ibute nsogbu na bọọlụ bọọlụ ma ọ bụ na-akwagharị, na-ebelata ịdị ike na ngbanwe ntụgharị. Enwere ike wepu egwu egwu a izizi site n'iji preloading. Bugote bụ ụzọ nke itinye ibu ọrụ na-adịgide adịgide na mbugharị, ozugbo ọ dabara, site na iji washers ma ọ bụ isi iyi ndị dabara na mgbanaka dị n'ime ma ọ bụ n'èzí.
Ndị Injinia gharịị ịtụle n'eziokwu na ọ dị mfe ibelata mkpochapụ na ngalaba pere mpe n'ihi na mgbaaka ndị ahụ dị obere ma dịkwa mfe nrụrụ. Dịka onye nrụpụta nke obere na nke pere mpe, JITO Bearings na-adụ ndị ahịa ya ọdụ na a ga-ejikwa nlezianya na-arụ ọrụ nke ọma. Ogwe osisi na gburugburu ụlọ dịkwa mkpa karịa ụdị nrịanrịa dị nro n'ihi na ntụgharị nke na-adị gburugburu ga-eme ka mgbanaka ndị ahụ dị nro ma mụbaa mkpọtụ, mkpọtụ na mgbatị.
Nghọtahie banyere ọrụ nke radial na axial emeela ka ọtụtụ ndị na-emegharị mmekọrịta dị n'etiti egwuregwu na nkenke, kpọmkwem nkenke nke na-esite na nnwepụta nrụpụta ka mma.
Fọdụ ndị mmadụ na-eche na ịmụrụ ọnụ dị oke mma ekwesịghị inwe egwuregwu ọ bụla ma na ọ ga-agbagharị ọfụma. Nye ha, egwuregwu aghara aghara na-adị obere ka ọ na-enye echiche nke obere mma, ọbụlagodi na ọ nwere ike ịbụ nkenke ziri ezi nke amachara anya eji egwu egwu. Dịka ọmụmaatụ, anyị ajụla ụfọdụ ndị ahịa anyị n'oge gara aga ihe kpatara ha ji achọ oke nkenke na ha agwala anyị na ha chọrọ, “belata egwuregwu ahụ”.
Otú ọ dị, ọ bụ eziokwu na ndidi na-eme ka nkenke ka mma. N'oge na-adịghị anya ka mbupute nke imepụta igwe mmadụ buru ibu, ndị injinia ghọtara na ọ baghị uru ma ọ bụ akụ na ụba, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma ọlị, imepụta ngwaahịa abụọ nke yiri. Ọbụna mgbe a na-agbanwe mgbanwe dị iche iche na-emepụta otu, a ga-enwe ọdịiche dị iche n'etiti nkeji na nke ọzọ.
Taa, nke a abịawo iji gosipụta nnagide ma ọ bụ nnabata. Ndidi klas maka bọl biarin, mara dị ka ISO (metric) ma ọ bụ ABEC (inch) ratings, mezie ekwe ekwe na cover nha gụnyere ime na elu mgbaaka size na roundness nke yiri mgbaaka na raceways. Klaasị dị elu ma sie ike na ndidi, ihe ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-agbakọta.
Site n'igosi nguzozi ziri ezi n'etiti nkwekọ na radial na egwuregwu axial n'oge eji eme ihe, ndị injinia nwere ike nweta ezigbo arụmọrụ arụmọrụ ma hụ na mkpọtụ dị ala na ntụgharị ziri ezi. N'ime ime nke a, anyị nwere ike kpochapụ ihe mgbagwoju anya dị n'etiti nkenke na igwu egwu, n'otu ụzọ ahụ Stanley Parker si gbanwee usoro mmepụta ihe, gbanwee n'ụzọ anyị si ele bearings anya.
Post oge: Mar-04-2021